Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Isiseko seembadada sikhuthaza ithemba elitsha eJamaica
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iimbadada Foundation Ithemba Elikhuthazayo
ISandal Foundation ikholelwa ukuba isenzo sokukhuthaza ithemba ngamandla anokususa iintaba. Ithemba, ngendlela elula, inokukhuthaza isenzo kunye namandla kwaye iguqule ngokuqinisekileyo ingqondo kunye neemvakalelo.
ISiseko ngumbutho ongenzi nzuzo owasungulwa ngo-Matshi 2009 ukunceda iSandals Resorts International iqhubeke nokwenza umahluko kwiCaribbean.
Zonke iindleko ezinxulumene nolawulo kunye nolawulo zixhaswa yiSanals International.
I-100% yayo yonke idola enikezelweyo iya ngqo kwinkxaso-mali eneempembelelo kunye namaphulo anentsingiselo kwiinkalo eziphambili zemfundo, uluntu kunye nokusingqongileyo.
Kukho iiprojekthi zeSandal Foundation kuzo zonke iziqithi apho IziNtshontsho ikhona. Namhlanje, sigxile kwithemba eliphefumlelweyo eJamaica.
Isiseko seembadada iphumeze yaza yaxhasa iiprojekthi kunye namalinge axhasa uphuhliso loluntu lwengingqi, ukuphuculwa kweenkqubo zemfundo kunye nokugcinwa kokusingqongileyo ngaphakathi eJamaica.
I-Flanker Peace & Justice Centre
ISandles Foundation isebenza kuluntu lwangaphakathi-dolophu yaseFlanker nabafundi abamalunga nama-300 abasebenzisa iZiko lezoBulungisa nyanga nganye. Inkqubo ye-Afterschool Care kunye neNkxaso eYandisiweyo (ACES) yaziswa yiSandals Foundation ukuqinisekisa indawo ekhuselekileyo, ecwangcisiweyo apho ulutsha olusemngciphekweni oluvela kuluntu lunokuxhamla kwiingcebiso ezizinikeleyo kunye nokucebisa, inkxaso ekhokelwayo ngomsebenzi wabo wesikolo kunye nezabelo zabo, kunye nokuthatha inxaxheba imisebenzi eyonganyelweyo yasemva kwemini ekhuthaza ukuziphatha kakuhle kwezentlalo.
Inkqubo yoQeqesho lweembadada/iFlanker kunye neNqanaba lokuQesha ibonelele ngemisebenzi kunye nemali yokufunda, imiboniso yezempilo esindleke, kwaye ikhuthaze ukuphuculwa kokufunda nokubhala.
Ubume obukhulu bamazinyo kunye neNkqubo yokuKhathalelwa kwamehlo
Nyaka ngamnye uluhlu lwamavolontiya lubandakanya iingcali zamehlo, oogqirha bamehlo, oogqirha bamehlo, iingcali zamehlo, abahlengikazi, kunye namavolontiya angenalo amehlo asuka eUnited States naseKhanada ukuba athathe inxaxheba kwikliniki yeveki yonke eyenziwa yenzeka ngokusebenzisana neSandal Foundation kunye nezinye iindawo zasekuhlaleni. amaqabane.
I-iCARE iphinde ibambisene neSibhedlele seNgingqi saseCornwall ukwenza utyando lwe-cataract ukuya kuthi ga kwi-50 ngaphandle kweendleko kwabo badinga kakhulu.
Ngokudibeneyo, iinkqubo zamazinyo eziMkhulu kunye noNonophelo lwamehlo zichaphazele abantu abangaphezu kwe-150,000 eJamaica.
I-Sandals Foundation ngokubambisana neSebe lezoLimo kunye nezokuLoba, isebenza ngokuzeleyo kwaye ilawula iindawo ezimbini zaselwandle e-Jamaica - i-Boscobel kunye ne-Whitehouse Marine Sanctuary.
Iindawo zokugcinwa kweentlanzi zaselwandle zinceda ekuphuculeni isitokhwe seentlanzi kwiindawo ezinciphayo zabalobi baseJamaica, ngokunjalo nokufundisa ngexabiso lokulondolozwa kobomi baselwandle kunye nempilo yabalobi basekuhlaleni.
IBoscobel Sanctuary isebenza ngokupheleleyo ukususela ngoMeyi ka-2013 ngokunyuka kwama-333% kwizityalo zentlanzi ngo-2015. I-Whitehouse Marine Sanctuary isebenza ngokupheleleyo ukususela ngoMeyi ka-2015.
Ukuze le projekthi ibe nozinzo, iSandles Foundation iqalise amaphulo okufundisa aliqela ukwenzela iindwendwe, amalungu eqela, kunye nabantwana besikolo ukuze baqonde ukubaluleka kokulondolozwa kofudo kunye nendima edlalwa ngumntu ngamnye. Ukongeza, amalungu eqela nawo afundiswe malunga nento afanele ayenze xa ufudo lubeka amaqanda kuzo naziphi na iipropati zeSandals okanye iiBeach Resorts.
Iindwendwe kwindawo ye-Ocho Rios zinokuthatha inxaxheba kwi-turtle tour apho zikwazi ukutyelela i-Gibraltar beach kwaye zifunde ngee-turtles zaselwandle kunye neentsana zaselwandle kunye nokubukela ukuba zibuyele elwandle.
ISandal Foundations isebenzisana neCARIBSAVE, iCoral Restoration Foundation, kunye neBluefield's Fisherman's friendly society ukuze bakhe iindawo ezimbini zekorale eJamaica ngaphakathi kweBluefield's bay marine sanctuary kunye neBoscobel marine sauriary. Xa zidibene ezi ndawo zekorale zikhula ngaphezu kwama-3,000 amaqhekeza ekorale ngonyaka. I-Boscobel coral nursery elawulwa yiSanals Foundation ukuza kuthi ga ngoku ityale ngaphezu kwama-700 amaqhekeza ekorale.
Ukugqunywa kweekorale kwiCaribbean kwehle ukuya kuthi ga kwi-90%. I-coral nurseries inceda ukubuyisela i-coral coverage ngokukhula okunempilo, iikorale ezikhula ngokukhawuleza kunye ukuwatyala kwakhona kwizakhiwo zonxweme. Oku kunceda ekuboneleleni ngeendawo zokuhlala zaselwandle kunye nokukhusela iindawo ezingaselunxwemeni kukhukuliseko.
Isiseko seSandals siqalise iprojekthi yokuvuselela kwangethuba enesihloko esithi Project Sprout. Le Projekthi iyilwe ukuphendula imfuno yokungenelela kwangethuba kwinqanaba elisisiseko lenkqubo yemfundo eliya kuthi lithintele okanye lilungise ukulungela kwabafundi ngokwaneleyo.
Ngokusetyenziswa kongenelelo ngoncedo oluthagethiweyo, umgangatho wootitshala, kunye nophuculo olusebenzayo, izakhono zobuzali ziyaqiniswa kwaye imisebenzi yasesikolweni yenziwa ekhaya, iphucula imeko yokufunda. I-Prout ijolise kubafundi ababudala buyiminyaka emi-3-5 kwaye isebenza kwizikolo ezihlanu: iLeanora Morris Basic, iCulloden ECI, iSeville Golden Pre-School, iKing's Prayimari, kunye neMoneague Teachers College Basic School.
Isikolo sabantwana baseWest End
I-Sandles Foundation ngokubambisana ne-CHASE Fund iye yasebenzisana ukuxhasa ukwakhiwa kwe-West End Infant School e-Negril, e-Westmoreland. Eli phulo liyimveliso yeSanals Foundation yokuqaphela imfuneko yeziko lokuxhasa iMfundo yaBantwana (ECE).
Ukwakhiwa kwe-West End Infant School yiprojekthi evunyiweyo ye-Ofisi yoMphathiswa weMfundo (i-MOE) ejongene nomba wokuphuculwa kweziseko zophuhliso, indawo eyaneleyo kunye nokhuseleko lwabantwana kumagumbi okufundela, kunye nemfuneko yokuphuculwa kwezakhono zokufundisa phakathi kootitshala balo mmandla.
Isikolo sabantwana abasaqalayo esigqityiweyo siya kubonelela ngethuba kubantwana abaneminyaka emi-3 ukuya kweyesi-6 kulo luntu ukuba bafikelele kwimfundo esemgangathweni yabasaqalayo kwindawo yokufunda enika inkxaso.
Novemba 13, 2021 kwi-14: 36
Njengombhali wokuhamba, ndiziva ndingcono malunga neeSandals eyazi imizamo yabo yobubele kuluntu ngalunye ngokobuqu!